एभरेष्ट बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण(आइतवार, २६ कात्तिक २०७४) | गृहपृष्ठ
Home लगानी एभरेष्ट बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण(आइतवार, २६ कात्तिक २०७४)
एभरेष्ट बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण(आइतवार, २६ कात्तिक २०७४)
एभरेष्ट बैङ्कको १ करोड ५० लाख ८८ हजार ८७ कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले गत असार १८ गतेदखि साउन २२ गतेसम्म ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गरेको थियो ।
बैङ्कले यो अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा ४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । कम्पनीले यो त्रैमाससम्म ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वषको सोही अवधिमा उसले ५१ करोड ३४ लाख खुद नाफा कमाएको थियो ।
छोटो अवधिमा ठूलो मात्रामा गरेको पूँजी वृद्धिको असर कम्पनीको अहिलेको प्रतिवेदनमा प्रतिशेयर आम्दानीमा आएको सङ्कुचनले स्पष्ट पार्दछ । गत आवमा ७८ दशमलव ३१ रुपैयाँ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ३२ दशमलव ५५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यही समयमा जगेडा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बैङ्कको जगेडामा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
निक्षेप र कर्जाको कुरा गर्दा उसले पहिलोे त्रैमासमा ९९ अर्ब ३७ करोड निक्षेप उठाई ८१ अर्ब ८५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । निक्षेप ११ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने कर्जा प्रवाह १८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
बैङ्कको मुख्य आम्दानीको कुरा गर्दा खुद ब्याज आम्दानी १३ प्रतिशत वृद्धि भएर १ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, बैङ्कको सञ्चालन नाफा ८ प्रतिशत वृद्धि भएर ८३ करोड ९ लाख रहेको छ । आम्दानीमा ६ करोड ७ लाख प्रोभिजन घट्न पुग्यो भने जोखीम कोषबाट २४ लाख ५५ हजार रकम फिर्ता भएको छ ।
बैङ्कले निष्क्रिय कर्जामा केही मात्रामा कम भएको छ । यस अवधिमा बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतबाट कम भएर शून्य दशमलव २६ प्रतिशतमा आएको छ भने निष्क्रिय कर्जाका लागि १०० प्रतिशत रकम व्यवस्था गरेको छ ।
बैङ्कले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २१० दशमलव ६५, कोषको लागत ४ दशमलव ८५ प्रतिशत, मूल्य आम्दानी अनुपात ३५ दशमलव २९ गुणा, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. २०४० दशमलव ९६ र तरलता अनुपात ३६ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।
पूँजी वृद्धिसँगै कम्पनीले खुद नाफा वृद्धि गर्न नसक्दा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी घट्न पुगेको छ । एकैपटक ठूलो मात्रामा पूँजी वृद्धि हुँदा कम्पनीलाई भविष्यमा प्रतिशेयर आम्दानी र लाभांश सन्तुलनमा राख्न प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ८ अर्ब लक्ष्य पुर्‍याउन अझै ३१ प्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन गतवर्षको खुद नाफाबाट बोनस दिएर पुग्ने देखिन्छ ।
प्राविधिक विश्लेषण : टेवा तोड्दै घट्दो प्रवृत्तिमा एभरेष्ट बैङ्क
प्रतिरोध २ : १३०० । प्रतिरोध १ : १२०० । हालको अन्तिम मूल्य : ११०५ । टेवा १ : ११०० । टेवा २ : १०००
एभरेष्ट बैङ्कको शेयरमूल्य १ वर्षयता घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ र हालको अवस्थामा पनि घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ । यस हप्ता एभरेष्ट बैङ्कको शेयरमूल्यले १ हजार १ सय ८० रुपैयाँको टेवा तोडेको थियो र त्यसपश्चात् यस बैङ्कको शेयरमूल्यमा विक्रेताको चाप बढ्दै आएको छ । बिहीवार यस बैङ्कको शेयरमूल्य ३० रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ६४ प्रतिशत घटेर १ हजार १ सय ५ रुपैयाँमा बन्द भएको छ भने २८ हजार ७ सय ९० कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
६ दिने र २१ दिने मुभिङ एभरेजअनुसार यस बैङ्कको शेयरमूल्य घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ । ६ दिने मुभिङ एभरेज २१ दिने मुभिङ एभरेजभन्दा तल रहेको हुनाले बजार उच्च रूपले घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको बुझाउँछ ।
एडीएक्स सूचकको नकारात्मक सूचक सकारात्मक सूचकभन्दा माथि रहेको हुनाले यस बैङ्कको शेयरमूल्य घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको बुझाउँछ ।
एटीआर सूचक प्रवृत्तिहीन अवस्थामा रहेको हुनाले यस बैङ्कको शेयरमूल्यमा उतारचढाव सामान्य रहेको सङ्केत छ ।
स्टोकास्टिक सूचक ओभरसोल्ड क्षेत्रमा रहेको हुनाले विक्रेताको चाप उच्च रहेको बुझाउँछ भने शेयर सस्तिएको पनि सङ्केत गर्छ ।
विभिन्न प्राविधिक सूचकले यस कम्पनीको शेयरमूल्य घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको बुझाएको हुनाले आगामी दिनमा पनि घट्दो प्रवृत्तिमा रहने सम्भावना उच्च रहेको बुझाउँछ ।
१० बैशाख २०७५, सोमबार १९:४३
१० बैशाख २०७५, सोमबार १८:२४
१० बैशाख २०७५, सोमबार १८:१०
प्रोफिट बुकिङ तर्फ लगानीकर्ता, नेप्से १.९२ प्रतिशत घट्दा डेढ अर्बको कारोबार
१० बैशाख २०७५, सोमबार १७:२८